← နိဗ္ဗာန်ကိုစိတ်ဝင်စားတာသာဓုခေါ်ပါတယ် —
သမိုင်းတွင်ဖြစ်တန်ရာချေ အများအပြား ရှိခဲ့သည်။ ဟော့ကင်းသည် သမိုင်း၏ ဖြစ်တန်ချေ အများအပြားရှိပုံကို တင်ပြခဲ့ဖူးသည်။ သူသည် အိုင်းစတိုင်းကို ဝေဖန်ရာ၌ ထိုအချက်အလက်ကို ထည့်တွင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။
ဥပမာအားဖြင့် သူ၏ (Einstein’s Dream) စာစုတွင်
(Einstein spent the later years of his life looking for suchatheory. He did not find one because he distrusted quantum mechanics. He was not prepared to admit that the universe could have many alternative histories, as in the sum over histories. We still do not know how to do the sum over histories properly for the universe, but we can be fairly sure that it will involve imaginary time and the idea of space-time closing up on itself.) ဟူ၍ဖော်ပြခဲ့သည်။
အိုင်းစတိုင်းသည် သမိုင်းဖြစ်စဉ်ကို တရားသေ တစ်ခုတည်း သတ်မှတ်ပြဌာန်းပြီးသား ဖြစ်သည်ဟူသော အယူအဆဘက်၌ ညွှတ်သည်။ အမှန်မှာမူ (Quantum Mechanics) အရ သမိုင်းဟူသည်မှာ အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံ ပြောင်းလဲ ရွေးချယ်ခွင့်များ ရှိသောအရာဖြစ်သည်ဟုသာ ယူဆရမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကို (Sum over Histories) ဟူ၍လည်း နာမည်ပေးနိုင်သည်ဟု ဖော်ပြခဲ့သည်။
အိုင်းစတိုင်းသည် (Sum over Histories) ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစား နားလည်ရကောင်း မှန်းမသိဘဲ သတ်မှတ်ပြဌာန်းပြီးဖြစ်သော သမိုင်းအစဉ်အလာကိုသာ လက်ခံခဲ့သဖြင့် သူသည် (Theory of Everything) ဟူသော အားလုံးကိုဖြေရှင်းနိုင်သော သီအိုရီကို မရရှိနိုင်ခဲ့ပေ။ သူ့ဘ၀၌ နောက်ပိုင်းတွင် ထိုသီအိုရီကို ရှာဖွေရင်းနှင့် အချိန်ကုန်ခဲ့လေသည်။ အမှန်မှာတော့မူ သမိုင်း၌ ဖြစ်တန်ချေရှိရာ၊ တစ်ဆစ်ချိုး အကွေ့များ အမြောက်အများ ရှိသည်ဟူ၍သာ လက်ခံထားရပေလိမ့်မည်။ ယင်းကား (Quantum Mechanics) ဥပဒေသအတိုင်း ဖော်ညွန်းခြင်းဖြစ်သည်။
အချိန်ယောင် ဆိုသည်မှာလည်း သမိုင်းအတွက် ထည့်သွင်း စဉ်းစားစရာ အချက်အလက် တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ဟော့ကင်းက ကောင်းကောင်း သဘောပေါက်ခဲ့သည်ဟု ယူဆခဲ့သည်။ ထိုအချိန်ယောင်သည် (It is something that shapes the universe we live in.) ဟူ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ စကြ၀ဠာကြီးအား ပုံဖော်နေသော အကြောင်းအရာများအနက် တစ်ခုဖြစ်တန်ရာကောင်းသည်ဟု တင်ပြခဲ့သည်။
(Quantum Mechanics) အယူအဆအရ သေးငယ်လှစွာသော အခြေခံ အမှုန်လေးများကို တိုင်းတာရန် မလွယ်ချေ။ ၎င်းတို့ကို တိုင်းတာလျှင် ၎င်းတို့သည် ရွေ့လျားသွားသည်သာ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့သည် ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်နိုင်သော အခြေအနေ၌ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် အနာဂတ်အတွက် ပုံသေကားချပ် တွက်ချက်ရန် အတိအကျအားဖြင့် မလွယ်ကူနိုင်ကြောင်း (Quantum Mechanics) က ထုတ်ဖော်ဖွင့်ဆိုခဲ့သည်။
အခြေခံ အမှုန်ကလေးများသည် သူတို့ဖြစ်ချင်သလို ဖြစ်တတ်သော သဘာဝရှိသည်။ သူတို့အား ထိမ်းချုပ်ရန်လည်းမလွယ်၊ တိုင်းတာရန်လည်းမလွယ်၊ သူတို့သည် သူတို့သဘာဝအားဖြင့်သူတို့ ဖြစ်ချင်သလို ဖြစ်တတ်သော သဘောရှိသည်။ ၎င်းကို အခြေခံ၍ (Quantum Mechanics) သည် အနာဂတ်ဆိုသည်မှာ ရေရာတိကျသော သဘောမရှိပါဟု တင်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာ၌ (နပဋိကင်္ခေ အနာဂတံ) ဟူသော စကားအရ အနာဂတ်သည် အစုအပုံရှိပြီးသားကြီးအဖြစ်နှင့် သတ်မှတ်ရန်မူ မဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ၌ အဆိုအမိန့်ရှိခဲ့သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာသည် သိပ္ပံနှင့်စာလျှင် လွန်စွာမှ နက်ရှိုင်းကျယ်ဝန်းလှသည်။ ဤအချက်ကို လောကုတ္တရာရော လောကီရောသိသော ပုဂ္ဂိုလ်များသာလျှင် နှိုင်းယှဉ်နိုင်ပေလိမ့်မည်။
Tags: Buddhism and Science, Myanmar Posts, ဗုဒ္ဓဘာသာ, လောကီ, လောကုတ္တရာ, ဟော့ကင်း
This entry was posted in Buddhism & Science and tagged Buddhism and Science, Myanmar Posts, ဗုဒ္ဓဘာသာ, လောကီ, လောကုတ္တရာ, ဟော့ကင်း. Bookmark the permalink.